Dowlada deegaanka Soomaalida oo soo saartay go’aamo jawaab u ah xasuuqii dhacay… – Hagaag.com
Dowlada deegaanka Soomaalida oo soo saartay go’aamo jawaab u ah xasuuqii dhacay…
Kaddib dhacdadii foosha xumayd ee lagu xasuuqay shacabka aan waxba galabsan ee degganaa galbeedka Gobolka Sitti, Golaha fulinta ee Dowladda Degaanka Soomaalidu waxaa ay soo saareen Go’aamo dhawr ah oo arrintaa kaga jawaabayaan.
Dowladda degaanka Soomaalidu waxaa ay waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiisyadii hadda ka hor ay kala saxiixdeen maamuladii hore ee ka talin jiray degaanka Soomaalida iyo degaanka Canfarta kaas oo ku saabsanaa in magaalooyinka Cundhufa, Caddaytu iyo Garbaciise lagu daro degaanka Canfarta, iyadoon xitaa aan shacabkii magaalooyinkaas degganaa aan lagala tashan.
Waxa kale oo uu goluhu go’aankan ku sheegay in Dowladda Degaanka Canfartu ay ku guul daraysatay sugidda amniga Soomaalida deggan saddexdan magaalo. waxa kale oo goluhu sheegay in xukuumadda oo la kaashanaysa Fadaraalka inay sugayaan amniga Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Caddaytu, Cundhufa iyo Garbaciise.
Goluhu wuxuu sidoo kale sheegay in saddexdaas magaalo shacabka deggan lagaarsiin doono gargaar bani’adamnimo, iyadoo lala kaashanayo hay’adaha samafalka iyo Dowladda Fadaraalka.
Mar uu goluhu ka hadlayay Shaqaalaha samafalka ee Save the children ee u xidhnaa maamulka Canfarta, inay si degdeg ah u siidaayaan maamulka Canfartu Shaqaalahaas oo ku xidhan jeelasha degaanka Canfarta, laguna soo wareejiyo DDS.
Ugu dambayna goluhu wuxuu sheegay in Ciidamada amniga ee degaanka Soomaalidu sugaan amniga goobaha xuduudaha. iyagoo aan ka gudbayn xuduuda degaanka Soomaalida.
Go’aamadan ayaa hadday siday tahay u hirgalaan waxay wax wayn ka badali doontaa xaaladda amni darro ee ka jirta galbeedka Gobolka Sitti.